ခွေးအမွေး၊ ကြောင်အမွေးလား…ပြုစားခံရတာလား…ဆေးပညာနဲ့အဖြေထုတ်တဲ့အခါ - Hello Sayarwon
အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေး » အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးပြဿနာများ
ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတချို့မှာ မြင်တွေ့ရဖူးသလို အပြင်လောကမှာလည်း ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်။ သားဥအိမ်တွင်းအလုံးတည်လို့ ကိုယ်ဝန်လိုလိုအထင်လွဲခံရ၊ ပစ်ပယ်ခံရတာမျိုးပေါ့။ ဒါတွေက သားဥအိမ်မှာဖြစ်တဲ့ အရည်အိတ် ။
ဒီတစ်ခါတော့ လူပြုစားတာတဲ့။ ခွေးတွေ၊ကြောင်တွေရဲ့အမွေးတွေစုပြီး ပိတ်ခဲနေတာတဲ့။ ဒီလိုအရပ်ပြောစကားတွေနဲ့ အရည်အိတ်ပြဿနာဟာ ဆရာဝန်တွေရဲ့ ခွဲစိတ်ကုသမှုနဲ့ ခွဲထုတ်လိုက်တဲ့အရည်အိတ်ထဲမှာ အမွေးလိုလို ဆံပင်လိုလိုတွေ ပါနေတဲ့အကြောင်းနဲ့ လူမှုမီဒီယာမှာပျံ့နှံ့လာပါတယ်။
ဒါတွေ ဟုတ်မဟုတ်ကို ဆေးပညာအရ အဖြေရှာကြည့်ရင် Dermoid Cyst လို့ခေါ်တဲ့ အရည်အိတ် က အဓိကတရားခံပါ။ Dermoid Cyst ထဲမှာ အမွေး၊ အရည်၊ သွား၊ အရေပြားဂလင်းတွေ‌ပါဝင်နေတတ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ် တစ်နေရာရာမှာ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
မိန်းကလေးတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ သားဥအိမ်ရေအိတ်တွေက အမျိုးမျိုးရှိပေမယ့် Dermoid Cyst ကတော့ တခြားနေရာတွေမှာလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ် –
မွေးတည်းက ပါလာတတ်ပြီး မသိသာပေမယ့် နည်းနည်းချင်းပဲ ကြီးထွားလာတတ်တဲ့ အရည်အိတ်ပါ။ မျိုးပွားဆဲလ်တွေကနေဖြစ်လာတာမို့ အမွေး၊ အဆီ၊ သွား၊ အရိုး၊ ချွေးဂလင်းတွေရဲ့တစ်ရှူးတွေ ပါဝင်နေတာပါ။
အများအားဖြင့် သိသာထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာမရှိကြပါဘူး။ အရည်အိတ်ကို ပိုးဝင်တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် အတော်လေး သိသိသာသာကြီးထွားလာမှသိကြတာပါ။ အဲဒီအချိန် သတိထားမိလာတဲ့ လက္ခဏာတချို့ကတော့ –
ပိုးဝင်နေတဲ့ အရည်အိတ်အနီးတဝိုက်က အရေပြား ရောင်ရမ်းလာမယ်။
ပေါက်ပြဲသွားတဲ့အခါ ရောဂါပိုးကပျံ့နှံ့သွားမယ်(ဥပမာ မျက်နှာမှာဖြစ်တဲ့ အရည်အိတ် ရောင်ရမ်းပေါက်ပြဲတယ်ဆိုရင် မျက်လုံးမှာ အရမ်းရောင်ရမ်းလာနိုင်ပါတယ်)
အရည်အိတ်က သားဥအိမ်မှာကြီးထွားတာဆိုရင် သူ့အနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့ ဗိုက်အောက်ပိုင်းဧရိယာ မှာ နာကျင်မှုကိုခံစားရနိုင်တယ်။ ရာသီစက်ဝန်းနဲ့ အနီးတဝိုက်ကာလအတွင်း နာကျင်မှုပိုသိသာနိုင်တယ်။
ခါးရိုးဆစ် Dermoid Cyst ကတော့ ကြီးထွားလာပြီး ခါးရိုးဆစ်အာရုံကြောတွေကို ဖိမိလာတာနဲ့ လက္ခဏာစပြီးပြလာမယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘယ်အာရုံကြောကို ထိခိုက်မလဲဆိုတာက အရည်အိတ်ရဲ့ အရွယ်အစားနဲ့ တည်နေရာကို မူတည်ပါတယ်။
– လက်မောင်းနဲ့ ခြေထောက်မှာ အားနည်းလာပြီး ထုံကျဉ်တာ၊
– ဆီးမထိန်းနိုင်တာ စတဲ့ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ နောက်ဆက်တွဲအန္တရာယ်မရှိနိုင်ပါဘူး။ သူက အမြဲအန္တရာယ်မရှိတတ်ပေမယ့် ပေါက်ပြဲတာ၊ ရောင်ရမ်းတာ၊ ပိုးဝင်တာတွေဖြစ်လာရင်တော့ ခွဲစိတ်ဖယ်ထုတ်ရပါတယ်။
ခါးရိုးဆစ် Dermoid Cyst ကို မကုသဘဲထားရင်လည်း ခါးရိုးဆစ်နဲ့အာရုံကြောတွေကို ထိခိုက်စေတဲ့အထိ ကြီးထွားလာနိုင်ပါတယ်။
သားဥအိမ် Dermoid Cyst တွေက ကင်ဆာဖြစ်လေ့မရှိပေမယ့် အတော်ကြီးလာတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆို သားဥအိမ်လိမ်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး သားဥအိမ်ကို သွေးမရောက်နိုင် ဒါမှမဟုတ် အရောက်နည်းစေနိုင် ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်မှာ လက္ခဏာ သို့မဟုတ် ဝေဒနာခံစားရတာ တခုခုထူးခြားနေပြီဆို အတွေးတွေမများဘဲ ဆေးရုံဆေးခန်းသာပြေးပါ။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ ရောဂါတွေကို အတွေ့အကြုံရှိဆရာဝန်တွေက အဖြေရှာစစ်ဆေးပြီး ကုသပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှ အန္တရာယ်အဆင့်မရောက်ခင် အချိန်မီကုသနိုင်မှာပါ။
Accessed Jan-2 1, 2020.
ဆယ်ကျော်သက် puberty hit ဟော်မုန်း အီစထရိုဂျင် တက်စတိုစတီရုန်း အပျိုဖော်ဝင် သားဥအိမ် လူပျိုဖော်ဝင် ဝှေးစေ့ ပျိုဖော်ဝင်ချိန်နောက်ကျ
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, ကျန်းမာခြင်းနည်းလမ်းများ စက်တင်ဘာ 28, 2020 .2mins read
သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းများ Thyroid crisis Thyroid storm သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း ရင်တုန် အဖျားတက် ခွဲစိတ်ကုသမှု လေဖြတ် ကိုယ်ဝန်ဆိပ်တက် Graves disease
အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေး, အမျိုးသမီးများတွင် ဖြစ်လေ့ရှိသည့် ဟော်မုန်းမမျှတခြင်း စက်တင်ဘာ 14, 2020 .2mins read
အီစထရိုဂျင်ဟာ အမျိုးသမီးများအတွက် အဓိကကျတဲ့ ဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်စဉ်ဘဝကနေ အရွယ်ရောက်ပြီး တဲ့အထိ အမျိုးသမီးဘဝကို ထိန်းကျောင်းပေးတဲ့ ဟော်မုန်းပါ။
အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေး, အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးပြဿနာများ စက်တင်ဘာ 9, 2020 .2mins read
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ခံစားရနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေ ကတော့ အမျိုးမျိုး ပါပဲ။ ဆေးခန်း ပြလောက် တဲ့အထိ မလိုအပ်ပေမယ့် ခံစားရ ခက်တာကတော့ အသေအချာ ပါပဲ။
မိခင်ကျန်းမာရေး, ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကျန်းမာရေး စက်တင်ဘာ 9, 2020 . 1 min read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဩဂုတ် 5, 2021 . 1 min read